जोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ सबै लगानीकर्ताले पाउने ! - Dainikee News::
जोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ सबै लगानीकर्ताले पाउने !
काठमाडौं, मंसिर २० । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निष्काशन गरेको साधारण शेयर (आईपिओ) सबैले पाउने भएका छन् । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार जोशीको आईपीओमा मागभन्दा २ दशमलव ८१ गुणा बढीको आवेदन परेको छ । बिक्रि प्रबन्धक सिद्दार्थ क्यापिटलले तथ्यांक भेरिफाइ भैरहेकाले यसमा केही घटबढ हुन् सक्ने जनाएको छ ।
जोशीले मंसिर १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म आईपिओ निष्काशन गरेको थियो । जोशीले स्थानीय बासिन्दालाई शेयर निष्काशन गर्दा बिक्री नभएको २ लाख ४२ हजार १० कित्ता समेत जोडेर कम्पनीले सर्वसाधारणहरुलाई १६ लाख ९० हजार ४७० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो।
निष्काशन गरिएको सेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार ७ सय १४ कित्ता कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ५ सय २३ कित्ता सामुहिक लगानीलाई छुट्याइएको छ । यस हिसाबमा सबै आवेदकले २० कित्ता शेयर पाउने आंकलन गरिएको छ । यद्यपि न्युनतम १० कित्ता भने सबै आवेदकले पाउने निश्चित छ ।
इक्रा नेपालले यस कम्पनीको आइपीओलाई कमजोर आधारहरु जनाउने इक्रा एनपि आईपिओ ग्रेड ५ मापन गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले हालको अवस्थालाईभन्दा पनि भविष्यमा राम्रो गर्ने आशमा शेयर खरीद गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वसाधारणले लगानी गरी संस्थाको हौसला बढाउने काम गरेकाले आगामी दिनमा नाफामुखी बनी लगानीकर्ताहरुलाई उचित प्रतिफल दिनेतर्फ संस्थाले ध्यानदिनुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ ।
यस हाइड्रोपावरले इलाम जिल्लाको पुवाखोलाबाट ३ मेगावाट क्षमताको अपर पुवा १ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलो आयोजनाको रुपमा २०७१ माघ १ गतेबाट यस आयोजना सञ्चालनमा ल्याई कम्पनीले व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्दै आएको हो । हाल कम्पनीको पूँजी रू. २० करोड २३ लाख ५३ हजार रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि आईपिओ बाँडफाँट पश्चात रू. ३७ करोड १४ लाख पुग्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २०, २०७५ /Thursday, December 6th, 2018, 12:49 pm